Bibi သည် အခြားသော messenger များထက် ဒေတာသုံးစွဲမှု ၆ဆ သက်သာပြီ၊ နေရာတိုင်းတွင် 2G/EDGE မှစ၍ သုံးစွဲမှုများသည့် Wi-Fi၊ ဂြိုလ်တုကွန်ရက် အထိ အသုံးပြုနိုင်သည့် ဒေတာသုံးစွဲမှု အနည်းဆုံး messenger တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Google Play App Store — Soon
Bibi သုံးစွဲသူများ အချင်းချင်း အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှု
Bibi သုံးစွဲသူများ အချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း ၊ ဗီဒီယို calls များခေါ်ဆိုခြင်း ၊ အသံဖိုင်များ ရှယ်ခြင်း ၊ တည် နေရာ များ မျှဝေခြင်း ၊ ဖိုင်များ ပေးပို့ခြင်း တို့ကို အင်တာနက် ရှိရုံမျှဖြင့် အခမဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှင်မြန်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စာပို့စနစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ serverless concept ကြောင့် သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများ နှင့် မိသားစု များကြားမှာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလျှင်မြန်ဆုံး နှင့် အလုံခြုံစိတ်ချရဆုံး စာပို့စနစ် အသုံးပြုပြီ စာများ ပေးပို့နိုင် ပြီနော် .... ဪ မေ့လို့..... ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု အပေါ်လိုက်ပြီးတော့ ပို့လိုရတဲ့ စတေကာလေး လှလှလေး တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်နော်......
အသံ နှင့် ဗီဒီယို calls များ ခေါ်ဆိုခြင်း
ကြည်လင်ပြတ်သားပြီ အသံပြတ်တောက်မှု ကင်းမဲ့တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းကို Bibi ကို အသုံးပြု၍ ခံစားလိုက်ပါနော် ..... အသံကြားရရုံ စာပို့ ရရုံလောက်နဲ့ အားမရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ HD အရည်အသွေး နှင့် ချစ်ခင်ရသူအချင်းချင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ပြောလို့ရတဲ့ ဗီဒီယို ၀န်ဆောင်မှုကိုလည်း အသုံးပြုလိုရတယ်နော် .....
ဓါတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယိုများ ပေးပို့ခြင်း
Bibi ကို အသုံးပြုပြီ ဓါတ်ပုံ နှင့် ဗီဒီယို များ ချက်ခြင်းဆိုသလို လျှင်မြန်စွာ ပေးပို့နိုင်ပြီး.... Bibi မှာ ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ ကင်မာရာ ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်း ရိုက်ကူးနိုင်တယ်နော် ......
အသံဖြင့် မက်ဆေ့ခ်များ မှတ်တမ်းတင်၍ ပေးပို့ခြင်း
တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဖို့ စိတ်မပါဘူးလား ? ပြဿနာ မရှိဘူးပါဘူး ! အသံမက်ဆေ့ခ်ကို တချက်တည်းနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပြီလေ ......
လွယ်ကူစွာ စာရွက်စာတမ်းများ မျှဝေခြင်း
PDF ဖိုင်ဆလိုက်ရှိုး များ၊ အသံဖိုင် များ၊ စာရင်းဇယားဖိုင် များ နှင့် တခြားသော ဖိုင်များကိုလည်း အီမေးလ် သို့မဟုတ် ဖိုင်များပေးပို့တဲ့ apps ကို အသုံးပြု စရာမလိုတော့ပဲ.....တခါတည်း ပေးပို့နိုင်ပြီနော်....
ပိုပြီးများလေ ပိုပြီ ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းလေ ဆိုသလိုပဲ.. :) မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်း များ၊ မိသားစု များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် အဖွဲ့များ ဖန်တီးလိုက်ပါ... Bibi မှာ လူပေါင်း ၂၅၆ ယောက်အထိ တခါတည်းနဲ့ မက်ဆေ့ခ် များ၊ ဓါတ်ပုံ များ၊ ဗီဒီယို များ ပေးပို့နိုင်တယ်လေ...
အနိမ့်ဆုံးသော ဒေတာ သုံးစွဲမှု
Bibi က ဒေတာသုံးစွဲမှု အပေါ်မှာ သတိထားတတ်တဲ့ အသုံးပြုသူများ အတွက် အထူး ရည်ရွယ်၍ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အခြားသော ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ messengers များထက် Bibi က ဒေတာသုံးစွဲမှု ၆ဆ သက်သာပြီ.... အရည်အသွေး မြှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို တစ် မီဂါဘိုက် ဘန်ဝိုက်ထ် ကိုသာ အသုံးပြုပြီ ၇ မိနစ် ကြာအောင် ခေါ်ဆို နိုင်မည့်ပဲဖြစ်ပါတယ်...
ခိုင်မာ စိတ်ချရတဲ့ လုံခြုံရေး နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ
သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် က အဓိကကျပါသည်။ သင့်ရဲ့ မည့်သည့် ဒေတာကိုမဆို ကျွန်တော်တို့ မည့်သည့် ဆာဗာတွင်မှ ကျွန်တော်တို့ မသိမ်းဆည်းပါ။ ဒါတင် မကသေးပါဘူး!သင့်ရဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ နှင့် မက်ဆေ့ခ် များကို လုံခြုံစွာဖြင့် အခြားသူဖတ်မရအောင် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါက ဘာကို ဆိုလိုလည်းဆိုတော့ သင့်ပေးပို့တဲ့ အသံ မက်ဆေ့ခ်၊ မက်ဆေ့ခ် များကို သင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုတဲ့ သူတစ်ဦးတည်းသာ ဖတ်နိုင် နားထောင်နိုင်မှာ ပဲဖြစ်ပြီး မည့်သူတစ်ဦးတယောက်ကမ၊ှ Bibi တောင်မှ မသိရှိနိုင်ပါဘူး။
မည့်သည့် ဖုန်းနံပါတ် ကိုမဆို Bibi-Out ဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ Bibi အကောင့်ကို အသုံးပြုပြီတော့ ကမ္ဘာရဲ့ ဘယ်နေရာကိုမဆို မိုဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် ကြိုးဖုန်းပဲ ဖြစ်စေ အရမ်းကိုသက်သာတဲ့ နှုန်းထားတွေနဲ့ Bibi-Out ကနေ ဆက်သွယ်ခေါ်ဆို နိုင်ပါတယ်.....
၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ